Semalt तपाइँको वेबसाइटलाई कसरी क्लकवर्कको जस्तै चलाउने भनेर बताउँछ
२०२१ मा, गुगलले वेबसाइट मालिकहरूका लागि केहि राम्रा आश्चर्यजनक सुविधाहरू रोल आउट गर्दैछ। मे २०२० मा, गुगलले यसको नवीकरण गरिएको कोर वेब भिटेलको आधारमा नयाँ र्याकिंग सिग्नल रोल आउट गर्ने योजना बनाएको छ। हामीसँग छलफल गर्न एक समर्पित लेख छ मुख्य वेब Vटल। हामी के छलफल गर्न लागेका छौं भन्ने बारे अझ राम्रो समझ लिनको लागि तपाईं त्यसलाई सन्दर्भित गर्न सक्नुहुन्छ।
गुगल प्रयोगकर्ता उन्मुख खोज ईन्जिन हो। यसको मतलब यो हो कि उनीहरूका अद्यावधिकहरू उत्तम प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको हो। अर्कोतर्फ, वेवसाइटहरू एन्टिटी हुन् जसले उनीहरूको प्लेटफर्महरू अझ बढि इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको आवश्यकतालाई अनुकूल बनाउन प्रयास गर्दछन्। के तपाई ठूलो आगमन परिवर्तनको लागि तयार हुनुहुन्छ?
यस प्रश्नको उत्तर दिन तपाईले सर्वप्रथम आवाश्यक हुन्छ तपाईको वेबसाइट अडिट गर्नुहोस्, यसको त्रुटिहरू पत्ता लगाउनुहोस्, र त्यसलाई ठीक गर्नुहोस्।
इन्टरनेट हाम्रो आधुनिक समाज को एक महत्वपूर्ण पक्ष हो। हामी सबै जानकारी र मनोरन्जनका लागि यसमा भर पर्दछौं। जब हामी चीजहरूको खोजीमा इन्टरनेट प्रयोग गर्छौं, हामी SERP मा प्रदर्शित वेबसाईटहरू मार्छौं। जब हामी प्रत्येक वेबसाइटको विश्लेषण गर्छौं, हामी ती चीजहरू खान्छौं जुन हामी मन पराउँदैनौं र वेबसाइटहरू प्रयोग गर्दछौं जुन हाम्रो आवश्यकतालाई मद्दत गर्दछ।
यो लेख पढ्ने धेरै जसोसँग तपाइँको वेबसाइट छ, र तपाइँ प्रयोगकर्ताहरू तपाइँको लिंकमा क्लिक गर्दा राम्रो समय पाएको चाहानुहुन्छ। तपाइँ तपाइँको आगंतुक फिर्ता आउन र मानिसहरूलाई आफ्नो वेबसाइट सिफारिस गर्न चाहनुहुन्छ। अवश्य पनि, तपाई सबैलाई खुशी पार्न सक्नुहुन्न, र तपाईका सबै आगन्तुकहरु श्रृंखला अनुसरण गर्दैनन्। केही प्रयोगकर्ताहरूले तपाइँको वेबसाइटलाई परिपूर्णको रूपमा देख्नेछन्, जबकि अन्य प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई त्रुटिपूर्ण फेला पार्न सक्छन् र अर्को वेबसाइटमा सर्न सक्छन् जहाँ उनीहरू अधिक सहज महसुस गर्दछन्।
जे होस्, त्यहाँ केहि लक्षणहरू छन् जुन बहुमत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रभावित गर्दछ। हामीले बुझेका छौं कि इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले सामान्यतया वेबसाइटलाई प्राथमिकता दिन्छन् जुन घडीको वरिपरि प्रभावी रूपमा कार्य गर्दछ। यो प्रत्येक वेबसाइटको लागि प्राप्य छ, जसले विघ्नबाधा पार्छ जब तपाइँको छैन।
वेबसाइट यूएक्सको टेक्निकल फ्रन्टमा तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू छन्:
त्रुटिहरू र अन्य अनावश्यक प्रभावहरूबाट छुटकारा पाउँदै
तपाईंको वेबसाइट कति छिटो लोड हुन्छ अधिकतम पार्दै
तपाइँको वेबसाइट कुनै पनि उपकरणमा प्रयोग गर्न सजिलो बनाउँदछ जुन यसलाई पहुँच गर्न सक्दछ
तपाइँको वेबसाइटलाई कसरी घडीको कार्य जस्तै चल्ने बनाउने
तपाइँको वेबसाइट मा टेक्निकल मुद्दाहरु को लागी
जब तपाईंसँग तपाईंको वेबसाइटमा धेरै प्राविधिक त्रुटिहरू छन्, तीसँग धेरै खराब साइड इफेक्टहरू छन् जसले तपाईंको सफलताको संभावनालाई बिगार्दछ। केहि सामान्य टेक्निकल मुद्दाहरू समावेश छन्
खराब प्रदर्शित सामग्री
मल कार्यरत पृष्ठहरू, उदाहरणका लागि, प्रयोगकर्ताहरूले सदस्यता बटन क्लिक गर्दै, तर केहि पनि हुँदैन।
तपाईले रूपान्तरण गर्नु भएको पृष्ठहरु SERP मा लिईरहेको छैन।
यी वा कुनै अन्य टेक्निकल एसईओ मुद्दाको नतीजा वेबसाइट वेबसाइट गतिविधि को एक कम मात्रा मा पीडित शुरू हुनेछ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले बुझ्नुहुन्छ कि तपाईंको वेबसाइट लक्ष्यहरू सीधा प्रयोगकर्ताको गतिविधिमा बाँधिएको छ। यदि तपाईंको प्रयोगकर्ता गतिविधि ग्रस्त छ भने, तपाईंको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न बढी गाह्रो हुन्छ।
यी मुद्दाहरू समयसँगै विकासको प्रशंसक हुन्, र तिनीहरूलाई तपाईंको साइटलाई बिगार्नबाट रोक्नको लागि उत्तम तरिका भनेको समयमै प्राविधिक अडिटहरू हो। यी लेखा परीक्षणहरू हप्ताको एक पटकको औसत गर्नु पर्छ। तपाईं अधिक वा कम गर्न सक्नुहुन्छ; यद्यपि अन्तरालहरू जति नजिकको हुन्छ त्यति नै उत्तम। तपाईको आडिट रिपोर्टहरू जाँच गर्न र तपाईले फेला पार्नुहुने कुनै त्रुटिहरू ठीक गर्न तपाईंले गर्नुपर्ने सबै समय सेट गरिएको छ।
के तपाईंले आफ्नो साइटको पृष्ठ खोजीमा कसरी देखा पर्छ त्यसमा केही फरकहरू देख्नुभयो? गुगल खोजी कन्सोल उपकरण प्रयोग गरेर, तपाईं आफ्नो साइटमा के गलत छ भनेर ठ्याक्कै पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। यस उपकरणमा, तपाईं अनुक्रमणिका> कभरेज सेक्सनमा तपाईंको अनुक्रमणिका मुद्दाहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
त्रुटि जाँच गर्नुहोस्, चेतावनीको साथ मान्य गर्नुहोस्, चेकबक्सहरू समावेश नगर्नुहोस्, र तलको सेक्सनले तपाईंको वेबसाइट कसरी अनुक्रमणिका गरिदैछ भनेर प्रत्येक समस्या प्रर्दशन गर्दछ। यदि तपाईं केहि पृष्ठहरूको बारेमा विशिष्ट हुनुहुन्छ भने विवरणहरूमा प्रविष्टिहरूमा क्लिक गर्नुहोस् त्यस विशेष पृष्ठमा परिणामहरू उत्पन्न गर्न।
तपाईले फेला परेका मुद्दाहरूको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ ती पृष्ठहरूलाई पुन: अनुक्रमणिकामा थपेर वा तिनीहरूलाई हटाएर। एकचोटि तपाईंले यो गर्नुभएन, वैध फिक्समा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईंको वेबसाईटलाई कसरी अनुक्रमणिकामा सुधार ल्याउने परिवर्तनहरू तपाईंको साइटम्यापमा गर्न सकिन्छ। यहाँ केहि सामान्य समस्याहरु छन्:
तपाईंसँग साइटम्याप छैन।
यो पुरानो हो
यी सबै मुद्दाहरूको समाधान गर्न, तपाईंले आफ्नो साइटमा पहिले नै अपडेट गरिएको साइटम्याप अपलोड गर्नुपर्नेछ। यो गर्न, तपाईं सक्नुहुन्छ
तपाईंको साइट नक्शा सिर्जना गर्नुहोस्। यो म्यानुअली वा XML-Sitemap उपकरण प्रयोग गरेर हुन सक्छ।
तपाईंको साइटमा यस अपडेट अपलोड गर्नुहोस्
अर्को, Google खोज कन्सोलमा अनुक्रमणिका> साइटम्याप सेक्सन भ्रमण गर्नुहोस्। यहाँ तपाईं आफ्नो साइटम्याप URL प्रविष्ट गर्नुहोस् र सबमिट क्लिक गर्नुहोस्।
यदि तपाईंसँग सबमिट गरिएको साइटम्याप सेक्सनमा अझै पनि कुनै मिति सकिएको साइटम्याप छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं तिनीहरूलाई हटाउनुहोस्।
धेरै केसहरूमा, तपाईंको वेबसाईटले कष्ट भोग्न सक्छ किनकि यो फाईल तपाईंको साइटबाट हराइरहेको छ। यदि यो तपाईंको साइटसँग मिल्दोजुल्दो छ भने, तपाईंले गर्नुपर्ने सबै फाइल अपलोड गर्नुपर्दछ र यो ठीकसँग कार्य गर्दछ भनेर निश्चित गर्नुहोस्। Robot.txt फाईलको उद्देश्य महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले खोजी ईन्जिनलाई बताउँछ कि उनीहरूले के गर्नुपर्दछ र तपाईंको साइटमा क्रल गर्नु हुँदैन। यदि यो फाईलको दुरुपयोग भयो भने यसले समस्या खडा गर्छ।
तपाईं यसलाई खोल्न र निम्न समस्याहरूको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ:
तपाईंको साइट क्रल गर्न खोज ईन्जिन बट्सको असक्षमता
यो त्रुटि हुन सजिलो छ। जब तपाईंको बट्सले तपाईंको साइटहरू क्रल गर्दछ, कोडको यो लाइन तपाईंको रोबोट्समा देखा पर्नेछ। txt फाईल:
यदि स्ल्याश अस्वीकृत पछि देखा पर्दछ: बट्सले केहि गर्न सक्दैन।
यदि कुनै डाइरेक्टरीहरू अस्वीकृत:/आदेश पछि दर्शाईन्छ, यसले सुनिश्चित गर्दछ कि खोज इञ्जिन बट्सले बुझ्दछ कि तपाईं उनीहरू क्रल हुन चाहानु हुन्न। तपाइँ पक्का हुन सक्नुहुन्छ कि तपाइँ यस जानकारीलाई अनुक्रमित गर्न चाहनुहुन्न; अन्यथा, बोट तपाईंको साइटको केही अंश अनुक्रमणिका गर्न असमर्थ हुनेछ तपाईंले खोजीमा देखा पर्न आवश्यक छ।
बट्स क्रल पृष्ठहरू र फोल्डरहरू जुन तपाईं क्रल हुन चाहनुहुन्न।
यो माथि वर्णन गरिएको समस्याको प्रत्यक्ष विपरीत हो। यहाँ, तपाईंले ब्लक गर्न चाहानु भएको निर्देशिकाहरू फाईलमा दर्शाउँदैनन्। तपाईंले अस्वीकृत गर्नुपर्दछ:/आदेशहरू प्रत्येक लाइनमा ती डाइरेक्टरीहरूको लागि देखा पर्दछ तपाईंले फाईल पुन: अपलोड गर्नु अघि।
Typos र वाक्यविन्यास त्रुटिहरू
यो त्रुटि स्वयं स्पष्टीकरणात्मक छ। एकचोटि तपाईंले तपाईंको सबै टाइपहरू र सिन्ट्याक्स त्रुटिहरू सच्याउनुभएपछि, तपाईंको रोबोट्स टीटीएसटी पुन: अपलोड गर्नुहोस्
उपकरणहरू जस्तै डीपक्रॉल र स्क्रेमर फ्रुग तपाईंको साइट वरिपरि छरिएका नक्कल सामग्री पत्ता लगाउन उत्कृष्ट छ। यहाँ यस श्रेणी अन्तर्गत केहि सामान्य त्रुटिहरू छन्।
पृष्ठ शीर्षक र मेटा विवरण
पृष्ठ शीर्षक र मेटा वर्णन सँग उस्तै नाम र वर्णन हुन सक्छ, जसले प्रयोगकर्तालाई भ्रमित गर्दछ। एकचोटि पत्ता लगाईए पछि, तपाइँले तपाइँको सबै नक्कलहरू तपाइँको साइट मा अद्वितीय सामग्री मात्र परिवर्तन गर्नुपर्दछ।
तपाईंको साइटमा वा अन्य साइटहरूबाट अन्य पृष्ठहरूबाट सामग्री प्रतिलिपि गरिएको थियो।
तपाईंले तपाईंको सबै सामग्री अद्वितीय बनाउनु पर्छ। यदि त्यो असम्भव छ भने, तपाइँले एक जोड्नु पर्छ rel="प्रमाणिक" पृष्ठको <हेड्स> सेक्सनमा URL मा ट्याग गर्नुहोस्।
उही यूआरएलहरू अनुक्रमणिकामा भिन्नताहरू
गुगलले कहिलेकाँही समान पृष्ठहरूलाई धेरै पटक अनुक्रमणिका गर्न सक्दछ। यो धेरै कारणहरूको लागि हुन सक्छ, त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं कुनै पनि अनावश्यक प्रतिलिपिहरूबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। केहि लोकप्रिय परिदृश्यहरू हुन्छन् जब त्यहाँ यसको यूआरएल पछि प्यारामिटरहरू हुन्छन् वा जब वेबसाइट दुबै HTTP र HTTPS संस्करणहरू हुन्छन्।
विषयवस्तु प्रदर्शन गर्दै मुद्दाहरू
यो मुद्दा सामान्यतया रूपमा देखा पर्छ:
क्षतिग्रस्त एch्कर पाठहरू
बिग्रिएको जाभास्क्रिप्ट फाईलहरू
बिग्रिएका लिंकहरू (र रिडिरेक्टहरू)
क्षतिग्रस्त वा हराइरहेको H1-H6 ट्यागहरू
त्यस्ता मुद्दाहरूको बारे पत्ता लगाउन तपाईंले एसईओ उपकरणहरू जस्तै वेबसीओओ प्रयोग गर्नुपर्नेछ। तपाईलाई गर्नु पर्ने कुरा भनेको तपाईको साइटको लागि परियोजना निर्माण गर्नुपर्दछ र यसलाई टेक्निकल अडिट उपकरणमा स्क्यान गर्नुपर्दछ। \_
संरचित डाटा त्रुटि
तपाइँको पृष्ठहरूमा संरचित डाटा थप्ने पार्कमा पैदल यात्रा गर्नुपर्दैन। यसमा यति धेरै प्रयास राखिएमा, यो एउटा मुख्य समस्या हुन सक्छ जब त्रुटिहरूले केवल राखेको प्रयासलाई मात्र नष्ट गर्दैन तर तपाईंको साइटमा खोजीमा कस्तो देखिन्छ।
तपाईंले गुगलको नि: शुल्क रिच रिजल्ट टेस्ट उपकरण प्रयोग गरेर कुनै त्रुटिहरू फेला पार्न र सुधार गर्न तपाईंले मार्क गर्नुभएको पृष्ठहरूको परीक्षण गर्नुपर्दछ।
HTML, CSS, र अन्य कोड त्रुटिहरू
तपाईको वेबसाइटमा कोडमा त्रुटिहरू हुनसक्दछन्, जुन तपाईको सामग्रीले राम्रोसँग प्रदर्शन नगरेको बेला सजिलैसँग याद हुन्छ। यद्यपि त्यहाँ परिस्थितिहरू छन् जब कोड त्रुटिहरूको प्रभाव देखिएको छैन। तपाइँ आफ्नो सबै समस्याहरू फेला पार्न W3C प्रमाणीकरण गर्ने जस्ता विश्लेषण उपकरणहरू मार्फत तपाइँको साइट चलाउनुपर्दछ। यो HTML, CSS, जाभास्क्रिप्ट, र धेरै अन्य प्रोग्रामिंग भाषाहरूको लागि काम गर्दछ। एकचोटि तपाईको नतिजा भयो, तपाईले भ्रामक पृष्ठहरू सुधार्न सक्नुहुन्छ
तपाइँको पृष्ठ लोड समय न्यूनतम गर्नुहोस्
उपकरणहरूमा तपाईंको पृष्ठहरू कति छिटो लोड हुन्छन् प्रयोगकर्ताको अनुभवको सब भन्दा यादगार पक्षहरू मध्ये यो एक हो। गुगलका लागि यो पनि महत्त्वपूर्ण र्या factor्कि factor कारक हो गग्गल यसले यसलाई महत्वपूर्ण बनाउँदछ कि तपाईंको वेबसाइट सकेसम्म चाँडो लोड हुन्छ। यसको कोरमा, पृष्ठको गतिले संकेत गर्दछ कि वेबसाईटले कसरी यसको सर्भरसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ।
कसरी तपाइँको वेबसाइट लोड छिटो बनाउने
पृष्ठमा सम्पत्तीहरूको संख्या न्यूनतम गर्नुहोस्
सम्भव भएमा सम्पत्तिहरू मर्ज गर्नुहोस्
तपाईंको छविहरू अनुकूलन गर्नुहोस्
पृष्ठ कोड अनुकूलन गर्नुहोस्
तपाईंको पृष्ठ कोडको अन्तमा JS स्क्रिप्ट राख्नुहोस्
राम्रो होस्टिंग सेवाहरूमा लगानी गर्नुहोस्
राम्रो सression्कुचन सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुहोस्
अल्छी लोडिंग प्रयोग गर्नुहोस्
केहि रिडाइरेक्टहरू छन्
मोबाइल उपकरणहरूको लागि तपाईंको साइट अप्टिमाइज गर्नुहोस्
यो अब समाचार छैन कि गुगलले वेबसाइटहरूलाई पुरस्कृत गर्दछ जुन मोबाइल उपकरणहरू र कम्प्युटरहरूमा प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ। तपाईंको साइट अनुकूलन गर्न को लागी इन्टरनेट को उपयोग गर्न सक्दछ कि अन्य उपकरणहरु मा उपयोगी छ। जब तपाइँको साइटलाई मोबाइल उपकरणहरूको लागि अनुकूलित गर्दै, यहाँ मुख्य लक्ष्यहरू छन्
कुनै सामग्री अवरोध पप-अप छैन
असमर्थित सामग्रीहरू छैनन्
एसईओ को टेक्निकल पक्ष सामान्यतया सबै भन्दा गाह्रो हुन्छ, र तिनीहरूलाई पेशेवर सहयोगको आवश्यक पर्दछ। हाम्रो ग्राहकहरु मा Semalt यी सबै सिक्न चिन्ता लिनु पर्दैन किनकि हामी तिनीहरूको तर्फबाट तिनीहरूको साइटको ख्याल राख्छौं। यसले हाम्रो ग्राहकहरूलाई उनीहरूको व्यवसायका अन्य पक्षहरू विकास गर्न अझ बढी समय दिन्छ जुन हामी सुनिश्चित गर्दछौं कि उनीहरूको वेबसाइट क्लकवर्क जस्ता कार्य गर्दछ। आज हाम्रो प्लेटफर्ममा शामिल हुनुहोस्, र तपाईंको वेबसाइट बढेको हेर्नुहोस्।